Wararka laga helayo dalka Pakistan ayaa sheegaya in kooxaha Taliban iyo Daacish sheegteen weerar maalintii Isniinta ka dhacay Cusbital ku yaalla magaalada Quetta ee galbeedka dalka Pakistaan.
Qaraxaasi waxaa ku dhintay 73 ruux oo in kabadan darsin ay ahaayeen Qareenno iyadoo goobaha caafimaadka la jiifiyay tiro intaasi ka badan.
Dadka dhintay waxaa sidoo kale kamid ahaa labo sawir qaade sida ay xaqiijiyeen laamaha booliiska.
Weerarka ayaa ka dhacay qaybta gurmadka deg dega ah ee xaruntaasi Caafimaad taaso aroortii hore ee Isniinta la geeyay Maydka Qareen caan ahaa oo toogasho lagu dilay, waxaana lagu magacaabi jiray Bilaal Anwar Kasi.
Booliiska dalka Pakistaan ayaa sheegay in weerarkaasi uu fuliyay ruux isku soo xiray walxaha qarxa.
Ra'iisul wasaaraha Pakistan, Nawaz Sharif, ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay dhimashada 73-da ruux ee lagu dilay isbitaalka.
Waa weerarkii ugu xumaa ee muddo ka dhacay gobolka Balochistan.
Wasiirka laga soo doorto gobolka dhibku ka dhacay ayaa goor sii horraysay ku eedeeyay dalka India.
2010-kii ayaa weerar caynkan ah lagu qaaday xarun caafimaad oo ku taalla waddanka Pakistan taasoo ay ku dhinteen dad badan.
​10 ku dhimatay dhisme soo dumay India
CALCUTTA- Dhisme weyn oo la dayactirayay magalada Calcutta dalka India ayaa soo dumay, wuxuuna galaaftay nolosha in kabadan 10 ruux kuwaasi oo qaybtood kamid ahaayeen shaqaalihii hayay howsha dayactirka dhismahaasi.
Dhawacyo kala duwan ayaa jira, waxaana qaybto ...
​Wariye Caan ah oo lagu dilay Pakistan